Semalt: Ahoana ny manakana ireo tranokala amin'ny Chrome amin'ny 4 Extensions
Ny tranonkala fanakanana dia mety ho fepetra ilaina ho an'ny mpampiasa aterineto samihafa. Misy fomba maro ahafahan'ny olona manakana ireo tranokala eo amin'ny solosainy. Ohatra, ny olona dia manova ny lozisan'ny rakitra amin'ny milina mba ahafahan'izy ireo miditra amin'ny URL tsy fantatra. Ny olon-kafa dia mampiasa ny DNS server izay manana rafitra fanamafisam-pahefana. Amin'ny fampiharana sasany, azonao atao ny manakatona tranonkala sasany ao amin'ny tranokala. Misy fomba maro ahafahanao manakana ireo tranonkala avy amin'ny tranonkalanao, ny ankamaroan'izy ireo dia misy ny fanitarana.
Ao amin'ity lahatsoratra SEO ity, i Igor Gamanenko, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia manome ny sasany amin'ireo tranonkala Chrome ahafahanao manakana ireo tranonkala: 8)
1. Lisitry ny olona manokana (amin'ny Google)
Io addon io dia mety mahatonga ny tranokala hanakana ny tranokala amin'ny valiny fikarohana. Ny fanivanana blocklist ataon'ny Personal dia natao tamin'ny orinasan'ny Google, izay midika fa marina ny vokatr'izany. Raha vao manamboatra ity fanitarana ity ianao dia afaka manakana vohikala avy amin'ny valin'ny tranonkala manokana. Azonao atao ny manao lisitry ny domains sy tranonkala tianao halaina amin'ny Google SERPs. Ho hitantana ireo tranonkala ireo dia azonao atao ny manindry ny fanitarana Blocklist manokana ary esory ireo tranokala hita ao amin'ny lisitry ny blôginao.
Ity fanampim-panazavana ity dia manampy ny mpampiasa iray hanakana lisitra manokana amin'ireo tranonkala mila atsahatra. Raha oharina amin'ny fanitarana blocklist an'ny persona, ianao dia tsy maintsy manampy ny vohikala arosonao mba hanakanana ny fomba fijeriny..Ity fanitarana ity dia manana tenimiafina izay afaka mametraka ny fanidiana ankizy. Azonao atao ny manakana ny fampiasana tsy ilaina avy eto. Raha vao tafapetraka, dia azonao atao ny manitsy ny Block Site Extension amin'ny alàlan'ny klikanao eo amin'ny sehatra. Azonao atao ny mametraka ny fanodikodinana na manaisotra azy avy eto.
Ity extension Extension Chrome ity dia mamafa tranonkala sasany amin'ny alàlan'ny famelana anao hametraka ny fotoana maharitra. Azonao atao, ohatra, ny fotoana laninao handany tranonkala manokana. Ity addon ity koa dia ahafahanao mamorona lisitr'ireo tranonkala tianao hotakiana. Azonao atao ny mampiasa ny safidy nokleary hanakanana tanteraka ny fahafahan'ny tranonkala.
Afaka maimaim-poana ity fitaovana ity. Manolotra tambajotra fitsikilovana maro amin'ny aterineto izy io. TinyFilter dia afaka manampy ny mpampiasa hanakatona ny votoaty manafintohina amin'ny fampisehoana amin'ny tranokala amin'ny ordinatera. Misy ihany koa ny tenimiafina hanakatona ny rindrankajy sy ny fifehezan'ny ray aman-dreny. Azonao atao ny manakana ny fidirana amin'ity adiresy ity amin'ny fampiasana ny tenimiafina, mametra ny antoko izay afaka manamboatra azy. Mamolavola ny menan'ny safidy; Azonao atao ny manindry ny sehatry ny browser amin'ny sehatr'ilay tranonkala voasakana .
Afaka mifehy ny fidirana amin'ny tranonao ianao amin'ny alalan'ny fomba maro. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fitantanana ny navigateur Chrome dia amin'ny alàlan'ny fanitarana. Ny fanitarana tranonkala toy ny Site block dia manampy amin'ny famerana ny fidirana amin'ny URL sasany avy amin'ny navigateur. Azonao atao, ohatra, ny lisitr'ireo tranonkala tsy tianao hitsidihana azy. Azo atao ihany koa ny mamolavola tenimiafina sasany amin'ireto fanitarana ireto mba hisakanana ny ankizy tsy hanilikilika. Ity lahatsoratra SEO ity dia afaka manampy anao hametraka ny adihevitra chrome tsara indrindra hifehezana ny fidirana amin'ny tranokala ao amin'ny tranokalanao Chrome Source .